Muslim houses destroyed in Rakhine Myae Pone township during night curfew | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bamas and Rakhines should peek into their mirrors before calling us Kalars or Bengali
Rakhine Terrorists attacked and killed the Muslims in Kyauktaw »
We got the reports by the victims that the Muslim houses were destroyed in Myae Pone Township on the 6/8/12 night. Illegal underground group called “Rakhine’s Power Comrade” had leaded and committed those crimes of destruction.
“Destruction of U San Thein’s house was started at 6:30 PM. Once after the town-lights were switched off at 10 PM, started to destroy U Kyar Aye, Ma Aye Nu, U Kar Lu, Daw Khin Hla May and Ma Khin Htwe’s houses.
“We heard the noises of destruction of Muslim houses but dare not go and look as the onlookers could be arrested with the false accusation of destroying or burning their own houses” said the experienced local Myae Pone township residence.
The local residents revealed that the illegal underground “Rakhine’s Power Comrade” group has connections with the Rakhine National Development Party. Currently that illegal gang is headed by Myae Pone Southern Town Monastry’s Abbot Sayar Daw A Shin Thirumani and controlled by U Maung Yae Chan, UK Photostat Shop owner U Kyaw Than and U Aung Tharzan from Rakhine National Development Party are controlling its activities.
“Justafew days ago, U Aung Tharzan, threatened the Rakhine Bama who bought 30 sacks of rice for the Muslims and they confiscated those supplies meant for us” revealed one Muslim from the group of Muslims with difficulty in getting food supply.
This entry was posted on August 7, 2012 at 1:36 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Muslim houses destroyed in Rakhine Myae Pone township during night curfew”
August 7, 2012 at 1:37 pm | Reply
ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့ရှိ မွတ်စ်လင်မ်နေအိမ်များ ညမထွက်ရအချိန်တွင် ဖျက်ဆီးခံရ @ http://myanmarmuslim.net/news.php?item.776.22
သြဂုတ်၊ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၂
မြန်မာမွတ်စလင်မ် မီဒီယာ (M.M.M)
မြေပုံမြို့ ရှိ မွတ်စ်လင်အိမ်ခြေများကို ရခိုင်ဗုဒဘာသာအကြမ်းဖက်သမားများက 6/8/12 ညဘက်တွင် ဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖျက်ဆီးခံရသူများ၏သတင်းပေးပို့ ချက် အရသိရသည်။ အဆိုပါဖျက်ဆီးခံရမှုများကို တရားမ၀င်မြေအောက်ဂိုဏ်း တစ်ခုဖြစ်သည့် ” ရခိုင်အားမာန်သွေးသောက်အဖွဲ့ ” ကဦးဆောင်နေကျူးလွန်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဦးစံသိန်း အိမ်ကိုည63း0လောက်မှာ စတင်ဖျက်ဆီးတယ်၊ ညပိုင်းမှာ ၁၀ နာရီမီးဖျက်တော့ ည၁၁နာရီလောက်မှစတင်ပြီး ဦးကြာအေး၊မအေးနု၊ဦးကာလူ၊ဒေါ်ခင်လှမေ၊မခင်ထွေး တို့ ရဲ့ နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးကြတာပါ။” ဟုနေအိမ်အဖျက်ခံရသူတစ်ဦးက Myanmar Muslim.net သို့ ပြောကြားခဲ့ သည်။
ဖျက်ဆီးခံရသူများထဲမှ ဒေါ်ခင်လှမေ သည်ကပ်ဒေါင်းဆွဲကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းအုပ်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါတောင်ပေါ်ရပ်ကွက် အ.မ.ကကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်ပညာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ “မွတ်စ်လင်မ်အိမ်တွေ အဖျက်ခံနေရတာကို အသံတွေကြားလည်း သွားမကြည့်ရဘူး သွားကြည့် ရင်ကြည့် တဲ့ လူကိုဖမ်းပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ပြီးမီးရှို့ တယ်တို့၊ အိမ်ကိုဖျက်တယ်တို့ ၊ ဆိုပြီးအပြစ်ပုံချမှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။” ဟုမြေပုံဒေသခံတစ်ဦးကကိုယ်တွေ့ကြုံနေရသည်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။
မြေပုံရှိမွတ်စ်လင်မ်အိမ်ခြေများကို ဦးဆောင်ဖျက်ဆီးနေသည့် ရခိုင်အားမာန်သွေးသောက် တရားမ၀င်ဂိုဏ်းသည် ရခိုင်အမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများဟု ဒေသခံများကပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရခိုင်အားမာန် တရားမ၀င်ဂိုဏ်းအား မြေပုံမြို့ တောင်ကျောင်း ကျောင်းတိုက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အရှင်သိရုမဏိ ကဦးစီးပြီး ဦးမောင်ရေချမ်း၊ UK မိတ္တူဆိုင် ပိုင်ရှင်ဦးကျော်သန်း၊ရခိုင်အမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ဦးအောင်သာဇံ တို့ကထိန်းချုပ် လှုပ်ရှားနေကြောင်းသိရသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲ ကျနော်တို့မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက် ဆန်အိတ်သုံးဆယ်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဗမာတစ်ယောက်ကိုသူတို့က ရန်ရှာတယ်။ပြီးတော့ အဲဒီရိက္ခာတွေကို ကျနော်တို့ကိုမပေးရဘူးဆိုပြီးပြန်သိမ်းသွားတယ်။ အဲဒါဦးအောင်သာဇံတို့အဖွဲ့ပါ”ဟု ရိက္ခာပြတ်လပ်မှု့ ကြောင့်ဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထဲမှ ဘာသာဝင်တစ်ဦးကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
တာဝန်ရှိသူများမှ ယခုအချိန်အထိ ထိုအဆိုပါဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးဟန့်တားခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သည်ကို မတွေ့ ရသေးပါ။